टाउको दुखिरहन्छ ? हासियार तपाईंलाई माइग्रेन पनि हुन सक्छ – दाङ खबर
टाउको दुखिरहन्छ ? हासियार तपाईंलाई माइग्रेन पनि हुन सक्छ
एजेन्सी/टाउको दुखेको अनुभव नै नभएको मानिस को होला ? टाउको दुख्नुका पछाडि धेरै कारण छन् । टाउको दुख्दै जाँदा कहिलेकाहीँ यसले खतरनाक मोड लिन पनि सक्छ ।
Prevविश्वकप क्रिकेट प्रतियाेगीता
Nextवडालाई बजेट वितरण सन्तुलित ढंगबाट-घनश्याम पाण्डे
कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित : प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी संघमा सरुवा हुन नपाउने